Epistily ho an'ny Romana - Wikipedia
Ny Epistily ho an'ny Romana na Taratasin'i Masindahy Paoly ho an'ny Rômanina dia boky hita ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao, isan'ireo epistily nosoratan'i Paoly. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ireo Kristiana tany Roma izy io ka ao izy no mamelabelatra fa ny finoana an'i Kristy ho mpamonjy no hanamarinana sy hamonjen'Andriamanitra ny olona rehetra na dia mpanota aza. Teo anelanelan'ny taona 55 sy 58 no nanoratana azy. Misy toko 16 ity boky ity.
4 Fizaran'ny boky
4.1 Ny fahamarinana avy amin'ny finoana (1.1 - 8.39)
4.2 Firenena voafidin'Andriamanitra i Israely (9.1 - 11.34)
4.3 Fiainam-baovao: fiainam-pitiavana (12.1 - 16.27)
Επιστολή προς Ρωμαίους / Epistolê pros Rômaious ny anarany amin'ny teny grika ary Epistula ad Romanos kosa amin'ny teny latina. Maro ny fomba iantsoana io boky io amin'ny fiteny malagasy: Epistily ho an'ny Romana (izay hafohezina amin'ny hoe Romana), hoy ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy Katolika. Epistolà na Taratasin'i Paoly ho an'ny Rômanina, (na Rômanina), hoy ny Katolika malagasy.
I Paoly no lazaina fa nanoratra ny Epistily teo anelanelan'ny taona 55 sy 58 tao Korinto.
Nanoratra ity taratasy ity i Paoly mba hampahafantarany ny tenany sy ny hafany amin'ny fiangonana any Roma. Mbola tsy nandeha tany amin'ity tanàna malaza ity izy, nefa maro ny Kristiana izay efa fantany anarana sady maniry ny hamangy azy ireo tsy ho ela izy (Rom. 15.22 - 16.21). Manambara amin'izy ireo i Paoly fa apostoly voafidy hitory ny vaovao mahafaly izy. Ka ny hafatra ambarany dia ny hoe: "Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha, dia vao amin'ny Jentilisa koa." (Rom. 1.16). Amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny alalan'ny Lalàna no hahafahan'Andriamanitra mandray ny olona na Jiosy izy na Jentilisa/Jentily (Rom. 3.21-24; 4.25). Mampahatsiahy ny mpamaky i Paoly fa efa nanota avokoa ny olona rehetra sady tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra (Rom. 3.23).
Mamaly izao fanontaniana izao ity epistily ity: Ahoana no haneken'Andriamanitra antsika? Satria ny Jiosy tsy nanaja ny Lalàn'i Mosesy; ary ny Jentilisa tsy nanaiky hino izay zavatra lazaina ny amin'Andriamanitra na dia efa niteny taminy tamin'ny fomba maro samihafa aza Andriamanitra (Rom. 1.18 - 3.20).
- Ny fahamarinana avy amin'ny finoana (1.1 - 8.39);
- Firenena voafidin'Andriamanitra i Israely (9.1 - 11.34);
- Fiainam-baovao: fiainam-pitiavana (12.1 - 16.27).
Ny fahamarinana avy amin'ny finoana (1.1 - 8.39)Hanova
I Paoly sy ny hafatra ny amin'ny vaovao mahafaly (1.1-17)
Samy meloka ny olona rehetra (1.18 - 3.20)
Ny finoana an'i Jesosy Kristy no anamarinana ny olona (3.21 - 4.25)
Fiainam-baovao ho an'ny olona nohamarinina (5.1-21)
Ny fiainana miaraka amin'i Kristy (6.1 - 7.25)
Ny fiainan'ny mino ao amin'ny Fanahin'Andriamanitra (8.1-39)
Firenena voafidin'Andriamanitra i Israely (9.1 - 11.34)Hanova
Tsy lainga ny tenin'Andriamanitra (9.1-21)
Samy vahoakan'Andriamanitra na Jiosy na Jentilisa rehefa mino (9.24-29)
Ny tsy finoan'i Israely no maha toy izao azy (9.30 - 10.21)
Tsy lavin'Andriamanitra ny olony (11.1-34)
Fiainam-baovao: fiainam-pitiavana (12.1 - 16.27)Hanova
Ny fomba iainan'ny mpino ny fiainam-pitiavana (12.22 - 12.21)
Tokony hanaja ny mpitondra fanjakana (13.1 - 13.14)
Tokony hahay mandefitra (14.1 - 15.13)
Teny fanaovam-beloma (15.14 - 16.24)
Fankalazana an'Andriamanitra (16.25 - 16.27)
Ireo Epistilin'i Paoly :
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_ho_an%27ny_Romana&oldid=1038745"
Dernière modification le 11 Oktobra 2021, à 10:43
Voaova farany tamin'ny 11 Oktobra 2021 amin'ny 10:43 ity pejy ity.